Chekutanga, manyowa ehuku mbishi haana kuenzana nefotereza yehupenyu. Organic fetiraiza inoreva mashanga, keke, mupfudze wezvipfuyo, zvisara zvehowa uye zvimwe zviwanikwa kuburikidza nekuora, kuvirisa nekugadzirisa kunoitwa fetereza. Manyowa emhuka ingori imwe yezvigadzirwa zvekugadzira fetereza.
Kunyangwe manyowa ehuku kana akaoma asina kuviriswa, zvinozotungamira mukuparadzwa kwemiriwo yegreenhouse, minda yemichero nezvimwe zvirimwa zvine mari, zvichikonzera kurasikirwa kukuru kwehupfumi kuvarimi. Ngatitangei kutarisa njodzi dzembishi yehuku isina kubikwa, uye nei vanhu vachifunga manyowa ehuku mbishi ari nani kupfuura iwo mupfudze wemhuka? Uye kushandisa zvizere sei huku manyowa nenzira kwayo uye zvinobudirira?
Njodzi sere dzinokonzereswa nyore nyore nekushandiswa kwemupfudze wehuku mudzimba dzekuchengetera uye minda yemichero:
1. Pisa midzi, pisa mbesa nekuuraya zvirimwa
Mushure mekushandisa isina kuviriswa manyowa ehuku, kana ruoko rwako rwakaiswa muvhu, tembiricha yevhu ichave yakakwira zvakanyanya. Muzviitiko zvakakomba, kufa kwefake kana kuzara denga kunononoka kurima uye kunoguma nekurasikirwa nemutengo webasa uye kudyara mbeu.
Kunyanya, kuiswa kwehuku mupfudze munguva yechando uye muchirimo kune njodzi huru yekuchengetedza, nekuti panguva ino, tembiricha iri mukati megreenhouse yakakwira, uye kuviriswa kwemanyowa wehuku kunotumira kupisa kwakawanda, zvichitungamira kumudzi unopisa . Manyowa ehuku aishandiswa mumunda wemichero munguva yechando nechirimo, ingori munguva yemidzi dormancy. Kana mudzi uchinge wapiswa, zvaizokanganisa kuunganidzwa kwehutano uye kutumbuka uye kubereka muchero mugore rinouya.
2. Salinization yevhu, inoderedza kugadzirwa kwemichero
Kuenderera mberi kwekushandisa manyowa ehuku kwasiya huwandu hwakawanda hwe sodium chloride muvhu, iine avhareji yemakumi matatu kusvika makumi mana emakirogiramu emunyu pa6 mativi emamita emupfudze wehuku, uye makirogiramu gumi emunyu paeka yakadzivirira zvakanyanya kukwana kwevhu uye chiitiko . Yakaomeswa phosphate fetiraiza, potashi fetiraiza, calcium, magnesium, zinc, iron, boron, manganese uye zvimwe zvakakosha zvinhu, zvichikonzera kusakanaka kwekukura kwezvirimwa, mashoma maruva mapundu uye kugadzirwa kwemichero, zvichitadzisa zvakanyanya kuvandudzwa kwegoho rezvirimwa uye mhando.
Nekuda kweizvozvo, huwandu hwekushandisa kwefetiraiza hwakadzikira gore negore uye mutengo wekuwedzera wakawedzera ne50-100%
3. Ita kuti ivhu riwedzere uye inokonzeresa dzakasiyana-siyana rhizosphere hosha uye hutachiona hutachiona
Nekuti iyo pH yehuku mupfudze ingangoita ina, yakanyanyisa kuva acidic uye inoomesa ivhu, zvichikonzera kukuvara kwemakemikari nekukuvara kwakanyanya kune tsinde uye midzi yemidzi, ichipa huwandu hwakawanda hwehutachiona hunotakurwa nemanyowa ehuku, chirwere chinotakurwa nevhu -kutakura mabhakitiriya, mavairasi uye inopa mukana wekupinda uye hutachiona, kana humidity uye tembiricha zvasvika kuchirwere zvichaitika.
Iko kushandiswa kweisina kukwana kuvirisa huku mupfudze, zviri nyore kukonzera simiti kuoma, yero yakasvava, atrophy inomira kukura, hapana maruva nemichero, uye kunyangwe rufu; Hutachiona hutachiona, chirwere chedenda, dzinde rakaora, midzi kuora uye bhakitiriya wilt ndiyo yakanyanya pachena sequelae yekushandisa manyowa ehuku.
4.Root pfundo nematode infestation
Manyowa ehuku musasa uye nzvimbo yekuberekera midzi-knot nematodes. Huwandu hwemidzi-knot nematode mazai ari zana pa1000 gramu. Mazai ari mumanyowa ehuku ari nyore kukwesha uye kuwanda nemakumi ezviuru neusiku.
Nematode ane hunyanzvi zvakanyanya kumakemikari anomiririra, uye anokurumidza kuenda pakadzika makumi mashanu kusvika 1.5 m, zvichiita kuti zvive zvakaoma kupora. Root-knot nematode ndiyo imwe yenjodzi dzinouraya zvikuru kunyanya kumatumba ekare anopfuura makore matatu.
5. Uyai nemishonga inorwisa mabhakitiriya, inokanganisa kuchengetedzwa kwezvigadzirwa zvekurima
Chikafu chehuku chine mahormone mazhinji, uye zvakare chinowedzera mishonga inorwisa mabhakitiriya kudzivirira zvirwere, idzi dzinozotakurwa kupinda muvhu kuburikidza nemupfudze wehuku, zvinokanganisa kuchengetedzeka kwezvigadzirwa zvekurima
6. Gadzira magasi anokuvadza, achikanganisa kukura kwezvirimwa, kuuraya mbesa
Manyowa ehuku mune yekuora maitiro ekugadzira methane, ammonia gasi nemamwe magasi anokuvadza, kuitira kuti ivhu nezvirimwa zvibudise kukuvara kweasidhi uye kukuvara kwemidzi, chakakomba kugadzirwa kweethylene gasi inhibition yekukura kwemidzi, chinovawo chikonzero chikuru kupisa midzi.
7. Kuenderera mberi kwekushandisa tsvina yehuku, zvichikonzera kushomeka kweoxygen mumidzi midzi
Kuramba uchishandisa manyowa ehuku kunokonzeresa kushomeka kwe oxygen mumidzi uye nekukura kwakashata. Kana manyowa ehuku akaiswa muvhu, inoshandisa oxygen muvhu panguva yekuora, ichiita ivhu kwechinguva mune hypoxia, inozotadzisa kukura kwezvirimwa.
8. Huru simbi dzinopfuura mwero
Manyowa ehuku ane huwandu hwakawanda hwesimbi inorema senge mhangura, mercury, chromium, cadmium, lead uye arsenic, pamwe neakawanda mahormone masara, ayo anokonzeresa simbi inorema muzvigadzirwa zvekurima, anosvibisa mvura yepasi nepasi nevhu, zvinotora nguva yakareba ye organic nyaya inoshandura kuita humus, uye inokonzeresa kurasikirwa kwakanyanya kwehutano.
Nei ivhu rekubereka richiita kunge rakanyanya kukwirira nekuisa mupfudze wehuku?
Izvi zvinodaro nekuti ura hwehuku hwakatwasuka, tsvina uye weti pamwe chete, saka iyo organic chinhu iri mune yehuku mupfudze, inopfuura 60% yezvinhu zvakasikwa iri muchimiro cheuric acid, uric acid kuora kunopa yakawanda nitrogen zvinhu, 500 kg yemanyowa wehuku wakaenzana ne76.5 kg yeurea, pamusoro pacho panoratidzika kunge zvirimwa zvinokura zvakasikwa zvine simba. Kana urwu rudzi rwemamiriro ezvinhu rikaitika mujekete mhando kana michero yemuti mazambiringa, inogona kuburitsa chirwere chakakomba chemuviri.
Izvi zvinonyanya kukonzerwa nekupokana pakati pe nitrogen uye trace element uye yakawandisa urea, inozokonzeresa kuti kufefetwa kwenzvimbo dzakasiyana nepakati uye kuronda kuvharwe, zvichikonzera mashizha yeyero, umbilical kuora, kutsemuka kwemichero uye chirwere chetsoka.
Wakambosangana nemamiriro ekupisa mbesa kana kuora midzi muminda yako yemichero kana minda yemiriwo?
Fetiraiza inoiswa zvakanyanya, asi goho uye mhando hazvigadziriswe. Pane chero zvakaipa kesi? sekufa kwehafu yehurefu, kuomesa ivhu, mashanga anorema, nezvimwewo mupfudze wehuku unoda kuenda mukuvira nekurapa kusingakuvadzi usati waiswa muvhu!
Rational uye inoshanda kushandiswa kwehuku mupfudze
Manyowa ehuku chinhu chakasvibirira chemanyowa, ine 1,63% yakachena nitrogen, ingangoita 1.54% P2O5 uye ingangoita 0.085% potasium. Inogona kugadziriswa kuita organic fetiraiza nehunyanzvi hwe organic fetiraiza yekugadzira michina. Mushure mekuvirisa, zvipembenene zvinokuvadza uye mbeu yemasora zvichabviswa nekukwira nekuderera kwetembiricha. Iyo yekugadzira mutsara wehuku mupfudze unonyanya kusanganisira kuvirisa → kupwanya → kusanganisa kwezvinhu → granulation → kuomesa → kutonhora → kuongorora → metering nekuisa chisimbiso → kuchengetedza zvigadzirwa zvakapera.
Inoyerera chati ye organic fetiraiza yekugadzira maitiro
Maitiro ekuyerera chati ye organic fetiraiza pamwe nekuburitsa pagore emakumi matatu ematani matani
Kwekutanga kuvaka kweiyo organic fetiraiza yekugadzira mutsara
1. Matangi mana ekuvirisa achavakwa munzvimbo mbishi nzvimbo, imwe neimwe 40m kureba, 3m yakafara uye 1.2m dee-p, nenzvimbo yakazara ye700 mativi emamita;
2. Iyo mbichana nzvimbo inogadzirira 320m mwenje njanji;
3. Nzvimbo yekugadzira inovhara nzvimbo inosvika zviuru zana nemazana mana emamirimita;
4. 3 vashandi vekugadzira vanodiwa munzvimbo mbishi zvinhu, uye vashandi makumi maviri vanodiwa munzvimbo yekugadzira;
5. Iyo yakasvibirira nharaunda nzvimbo inoda kutenga matatu-matani forklift rori.
Huru midziyo yehuku mupfudze wekugadzira mutsara:
1. Pakutanga-nhanho michina yekuvirisa wemanyowa wehuku: groove compost Turner muchina, chinokambaira compost Turner muchina, inozvifambisa yega kompositi Turner muchina, cheni ndiro kompositi Turner muchina
2. Kupwanya midziyo: Semi-nyoro zvinhu crusher, cheni crusher, mira crusher
3. Kusanganisa michina: chinjikira chisanganiso, disc chisanganiso
4. Midziyo yekuongorora inosanganisira Muchina wekuongorora muchina uye inodedera yekuongorora muchina
5. Granulator michina: inoshungurudza granulator, disc granulator, extrusion granulator, muhombe dhiramu granulator uye kutenderera-kuumba muchina
6. Kuomesa michina: muhombe dhiramu kuomesa
7.Muchina wekutonhodza: Rotary kutonhora muchina
8.Midziyo yekushandisa: yakawanda feeder, huku mupfudze dehydrator, unhani muchina, guruva muteresi, otomatiki huwandu hwekupakata muchina
9. Zvigadzirwa zvekufambisa: bhandi rinotakura, bhakiti rinosimudza.
General organic manyowa kugadzirwa maitiro dhizaini anosanganisira:
1. Unyanzvi hunobudirira hwematambudziko akaoma uye bhakitiriya flora kuwanda.
2.Advanced material yekugadzirira tekinoroji uye yekuvirisa chinovira maitiro.
3. Iyo yakanakisa yakakosha fetiraiza fomura tekinoroji (iyo yakasanganiswa musanganiswa yechigadzirwa fomura inogona kugadzirwa inoshanduka zvichienderana neivhu remuno nehunhu hwezvirimwa)
4. Inonzwisisika yekudzora tekinoroji yechipiri kusvibiswa (gasi remarara uye hwema).
5. Maitiro ekugadzira uye tekinoroji yekugadzira ye fotereza yekugadzira mutsara.
Nyaya dzinoda kutariswa mukugadzirwa kwemanyowa ehuku
Kunaka kwezvinhu zvakasvibirira kwakakosha kwazvo mukugadzirwa kweyakagadzika manyowa. Zvinoenderana neruzivo, kunaka kwezvinhu zvese zvakasvibirira kunofanirwa kuenzaniswa neinotevera: 100-60 poindi yezvinhu zvakasvibirira nezve 30-40%, 60 poindi kune angangoita 1.00 mm dhayamita yezvinhu zvakasvibirira nezve 35%, uye ingangoita 25% -30% dhayamita ye 1.00-2.00 mm. Nekudaro, mukuita kwekugadzira, huwandu hwakawandisa hwezvakanaka zvakapusa zvinhu zvinowanzo kukonzera matambudziko senge akakura zvidimbu uye zvisina kujairika zvidimbu nekuda kweakanyanya viscosity.
Kukura Chiyero cheMupfudze wehuku
Manyowa ehuku anofanirwa kuve akaora zvizere pamberi pekushandisa. Izvo zvipembenene zviri mupfudze wehuku nemazai avo, pamwe nemabhakitiriya anotapukira, zvichagadziriswa kuburikidza neyakaora (kuvirisa). Mushure mekuora zvizere, mupfudze wehuku unozova fetereza yemhando yepamusoro.
Panguva imwechete nemamiriro matatu anotevera, unogona kutonga muto wehuku wakanyatso kuviriswa.
1. Chaizvoizvo hapana hwema hwakaipa; 2. Chena hyphae; 3. Manyowa ehuku ari mune yakasununguka mamiriro.
Iyo yekuvirisa nguva inowanzo kuve yemwedzi mitatu pasi pechisikigo mamiriro, ayo anozomhanyisa zvakanyanya kana kuvirisa mumiriri akawedzerwa. Zvichienderana netembiricha iri mukati, mazuva makumi maviri nemakumi matatu anowanzodiwa, uye mazuva 7-10 anogona kupedzwa pasi pemamiriro ekugadzirwa kwefekitori.
Zvemukati zvemvura zvinofanirwa kugadziriswa pamberi pemanyowa ehuku. Mukuita kwekuvirisa manyowa efotereza, kukodzera kwemukati memvura kwakakosha kwazvo. Nekuti iyo inowora mumiririri izere nehupenyu mabhakitiriya, kana yakanyanya kuoma kana yakanyorova mvura inokanganisa kuvirisa kwehutachiona, kazhinji hunofanirwa kuchengetwa pa60 ~ 65%.